ချစ်သူများနေ့ (Valentine's Day) - Myanmar Network
ချစ်သူများနေ့ (Valentine's Day)
Posted by zar ni (My Way!) on February 7, 2013 at 16:43 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ဆိုလျှင် ချစ်သူများနေ့ Valentine's Day တစ်ခေါက်ရောက်ပြန်ပေတော့မည်။ ချစ်သူရီးစားရှိသူတို့ကတော့ ထိုနေ့တွင် holding hands each other affectionately ကယုကယင် ရွှေလက်တွဲလျက် celebrate the day ပျော်ပွဲဝင်ဖို့ excited ရင်ခုန်နေလောက်ပေပြီ။ ချစ်သူများနေ့မှာ ချစ်သူစုံတွဲတွေဘာလုပ်ကြသနည်းဆိုတာက စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပေမည်။ တလွဲတော့မတွေးကြပါနဲ့။ Many people go on special dates for Valentine's Day. အများစုကတော့ ချိန်းတွေ့ကြ၊ ထွက်လည်ကြပတ်ကြတာပေါ့။ the date ချိန်းတွေ့မှုဟာ candlelit dinner ဖယောင်းတိုင်မီးလေးတွေရဲ့ မှိန်ပျပျအလင်းရောင်အောက်က ညစာစားပွဲလို romantic ချစ်ကြည်နူးဖွယ်ရာ၊ ရင်ခုန်စိတ်ကူးယဉ်စရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မိမိတို့အိမ်မှာကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်လို့ ဖြစ်စေ စားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်း တစ်ခုကိုသွားလို့ဖြစ်စေကြိုက်ရာရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ ထုံးစံကတော့ ယောက်ျားလေးက အကုန်အကျခံရတာများပေမယ့် go Dutch တစ်ယောက်တစ်ဝက် မျှခံကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။
Some people haveapicnic, where you take food and drink andapicnic blanket, and eat outdoors. တစ်ချို့တွေကတော့ ပျော်ပွဲစားထွက်ကြတယ်။ အစားအသောက်တွေယူ၊ ငြိမ်းချမ်းတဲ့ ပန်းခြံလေးထဲက လှိုင်းကြက်ခွပ်လေးတွေထနေတဲ့ ရေကန်လေးနံဘေး မြက်ခင်းစိမ်းစိမ်းပေါ် ပျော်ပွဲစားထွက်တဲ့ဖျာအခင်းလေးဖြန့်ခင်းလို့ နှစ်ကိုယ်တူစကားတွေဆိုကြမယ်။
Valentine's Day should involve some romance. ဗယ်လင်တိုင်းနေ့ဟာ ကြည်နူးဖွယ်ရာတစ်ခုခုတော့ပါသင့်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ romance ဆိုတာ တစ်ယောက်ယောက်ကို courtship ပိုးပန်းနေတုန်းဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အရာလေးတစ်ခုပေါ့။ တစ်ယောက်ယောက် fall in love ကိုယ့်ကိုပြန်ချစ်လာအောင်လုပ်ရတဲ့နည်းလမ်းအဖုံဖုံတွေဆိုပါစို့။
အဲဒီနေ့မှာကိုယ့်ရဲ့အချစ်တွေကို pour one's heart out to someone စိတ်ထဲရှိသမျှဖွင့်အံ တတ်ကြတယ်။whisper sweet nothings in (someone's ear) တီတာချစ်စကားလေး တွေပြောကြတယ်။ ဒီလိုပြောရာမှာ from the bottom of one's heart ရိုးရိုးသားသားပြောတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။တနည်းအားဖြင့်aheart-to-heart ပေါ့. ဂျွန်လင်နွန်က Love isapromise, love isasouvenir, once given never forgotten, never let it disappear." အချစ်ဆိုတာကတိတစ်ခု၊ အချစ်ဆိုတာအမှတ်တရ သိမ်းထားရတဲ့အရာ၊ ပေးပြီးသွားရင်မေ့ဖျောက်ပစ်လို့မရတဲ့အရာ၊ သူ့ကိုဘယ်တော့မှပျောက်ကွယ် မသွားစေနဲ့” တဲ့
Boyfriends ချစ်သူကောင်လေးနဲ့ Girlfriends ချစ်သူကောင်မလေးတွေဟာ giveaValentine's Day card to each other တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် ဗယ်လင်တိုင်းကတ်လေးတွေ အပြန်အလှန် ပေးလေ့ရှိတယ်။ ပေးလေ့ရှိတဲ့ gift, present လက်ဆောင်တွေကတော့ stuffed animals လို့ခေါ်တဲ့အစာသွပ်ထားတဲ့ တိရိစ္ဆာန်ရုပ်လေးတွေ၊ ဥပမာ teddy-bears ၀က်ဝံရုပ်လေးတွေ ကို cute slogans ချစ်စကားသ၀ဏ်လွှာလေးတွေနဲ့ love-heart လို့ခေါ်တဲ့အနီရောင်အသည်းပုံလေးတွေ ကတော့ မပါမဖြစ်ပါပဲ။ တစ်ခါတစ်ရံမှာတော့ ကတ်ပြားပေါ်မှာ cupid မြားနတ်မောင်လေး တွေလည်း တွေ့နိုင်လိမ့်မယ်။
နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ဇာတ်လိုက်ကျော်ကတော့ roses နှင်းဆီပန်းလေးတွေပေါ့။ နုညံ့တဲ့အချစ်ရဲ့အရောင်ဟာ pink ပန်းနုရောင် လို့မှတ်ယူထားကြတော့ ပန်းရောင်နှင်းဆီပွင့်လေးတွေ ပေးကြတယ်။ ပိုပြီးပြင်းပြင်းရှရှဖြစ်တဲ့အချစ်က red roses ပါတဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နှင်းဆီနီဟာ ရိုမန်အချစ်နတ်ဘုရားမ Venus ရဲ့အကြိုက်ဆုံးပန်းဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဒါကြောင့် ဗယ်လင်တိုင်းနေ့မှာ အမေရိကန်တစ်နိုင်ငံတည်း နှင်းဆီနီနီပန်းပွင့်ပေါင်း ၁၈၉ သန်းကျော်ရောင်းရတယ်တဲ့။ တစ်ချို့ကြတော့ ကိုယ့်ကိုမသိစေချင်တော့ secret admirer ဆိုပြီးပို့တတ်ကြတယ်။ အခုခေတ်မှာတော့abox of chocolates ချောကလက်ဗူးလေးတွေပေးတာ ပိုပြီးခေတ်စားလာပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ဖူးစာရှင် Mr. Right တွေ့ပြီး ကံကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတွေတော့ proposing marriage လက်ထပ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခံရတဲ့အနေနဲ့ ring လက်စွပ်ကလေးတွေရနိုင်တယ်။
တွဲလာတာကြာတဲ့ couples စုံတွဲတွေအတွက်တောင်မှ (people who are going out with အမြဲတွဲနေသူတွေ၊ married to someone လက်ထပ်ပြီးသားအိမ်ထောင်သည်တွေ) ချစ်သူများနေ့ ဟာ အချစ်ကိုတဖန်ပျိုးထောင်တဲ့ အထိမ်းအမှတ်နေ့လေးပါ။ စိတ်ချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ ကောက်နေကြတဲ့အတွဲတွေအတွက်လည်း get back together ပြန်ပေါင်းထုပ်ဖို့အကြောင်းပြစရာ နေ့လေးတစ်နေ့ပေါ့။ တစ်ခါတစ်လေ အမှားအယွင်းလုပ်မိသူကို give someoneasecond chance ဒုတိယမ္ပိခြေဦးလှည့်ခွင့်လေးတော့ပေးသင့်တာပဲလေ။ love begets love တဲ့။ စပိန်လိုတော့ amor con amor se paga. အချစ်ပေးရင်အချစ်ပြန်ရတာပေါ့။ ပေးအယူနားလည်ကြည်ဖြူမှုတွေ သာရှိရင်တော့amatch made in heaven နေနဲ့လရွှေနဲ့မြပမာ လို့ပတ်ဝန်းကျင်က ထောမနာပြုကြပေတော့မယ်။ အပေးအယူဆိုပေမယ့် အချစ်ကလွဲလို့ တခြားငွေကြေး၊ အောင်မြင်မှု၊ အခွင့်အရေး တစ်ခုခုလိုချင်လို့ပေးတဲ့ဟန်ဆောင်အချစ်မျိုး cupboard love ကတော့တချိန်ချိန် walk out on ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ဆက်သွားကြရပါလိမ့်မယ်။ True love does not insist to change each other but remain as it is with the differences. အချစ်စစ်ဆိုတာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဇွတ်ပြောင်းလည်းဖို့ကြိုးစားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှစ်ဦးသားမတူညီမှုတွေကို သည်းခံနိုင်ခြင်းသာဖြစ်တယ်တဲ့။
ရိုမန်အင်ပါယာခေတ်တုန်းက စစ်သားတွေကိုလက်ထပ်မပေးဖို့တားမြစ်ချက်ကို ဆန့်ကျင်ပြီး မင်္ဂလာပွဲတွေချီးမြှင့်ပေးခဲ့တဲ့ Valentinus အမည်ရှိတဲ့ ခရစ်ယန်သူတော်စင်တစ်ပါးကို ရည်ရွယ်ပြီးကျင်းပလာလိုက်တာ အခုဆိုရင် ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပေပြီ။ အနောက်တိုင်းက အလေ့အထတစ်ခုဟာအရှေ့ဘက်ကိုစီးမျောလာရာကနေကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း လူငယ်စုံတွဲတို့အတွက် တစ်နှစ်တစ်ခါအချစ်ကိုသက်သေပြတဲ့နေ့ကလေးတစ်နေ့ဖြစ်လာခဲ့ပေပြီ။
အမှန်တော့ ကိုယ့်ချစ်သူကို တစ်နှစ်မှတစ်ခါချစ်သက်သေပြတာထက် တစ်ပတ်ကိုတစ်ခါလောက်တော့ ကိုယ်ပိုင် ဗယ်လင်တိုင်းနေ့ကလေးတွေထားရှိနိုင်ရင် မကောင်းဘူးလားခင်ဗျာ။ အဲဒီနေ့ကလေးကို တဏှာရာဂတွေနဲ့စွန်းထင်းမသွားအောင်တော့ သတိတရားလေးနဲ့စောင့်ထိန်းဖို့လိုပေလိမ့်မယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူအားလုံး အတွက် ဒီကဗျာလေးကို လက်ဆောင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
love grows likeatree.
it can never whither
you appreciate and
Permalink Reply by linnwady on February 9, 2013 at 13:09
Permalink Reply by cherryeino on February 9, 2013 at 15:15
Permalink Reply by Avirl Swift on February 10, 2013 at 10:51
Permalink Reply by chit chit on February 11, 2013 at 22:38
I like the poem and also the way you express the valentine's article.
Permalink Reply by nay min on February 12, 2013 at 9:38
Permalink Reply by haukhanpau on February 13, 2013 at 9:11
Permalink Reply by Ei Mon Kyaw on February 13, 2013 at 12:17
Nice article.Thanks for your sharing.
Permalink Reply by venus on February 13, 2013 at 13:57
wow really nice :)
Permalink Reply by Myintpopohtwe on February 14, 2013 at 10:21
Permalink Reply by venus on September 18, 2013 at 8:30
Permalink Reply by zawzawminn on February 14, 2014 at 16:54